Fightzone na-ebuputa Ije Ozi Gbanwee zuru ụwa ọnụ maka British na International Boxing na Red Bee's OTT Platform | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » Fightzone na-ebupụta Ọrụ Gụgharia zuru ụwa ọnụ maka British na International Boxing na Red Bee's OTT Platform
Fightzone na-ebupụta Ọrụ Gụgharia zuru ụwa ọnụ maka British na International Boxing na Red Bee's OTT Platform
Fightzone bụ ọrụ ọhụụ zuru ụwa ọnụ zuru oke raara nye ndị ọkpọ Britain na mba ụwa, na-ebido Friday Eprel 30th, na ikpo okwu OT Bee Red Bee. Ndị na-akwado ụwa ga-enwe ike ịnweta ihe omume 50 na-ebi ndụ kwa afọ, na klas ịkụ ọkpọ ụwa, na-agbanye ozugbo na ngwaọrụ ha họọrọ. Red Bee na-enyere Fightzone aka ịnye ọtụtụ ndụ iyi n'otu oge na mgbasa ozi mgbasa ozi, site na ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ na ndenye aha dabere na nhọrọ, yana ọtụtụ ọnụ ahịa na ego. Ihe omume mbụ na Fightzone premiers na Mee 21st, na ngosipụta maka aha English Lightweight, n'etiti Anthony Tomlinson na James Moorcroft. Ihe omume na-esonụ ga-ekpebi aha IBF European Heavyweight aha na Mee 28th, n'etiti Kash Ali na Tomas Salek.
"Jim Bee bụ onye ọrụ teknụzụ zuru oke maka anyị, ebe anyị na-ebupụta mgbagha ọkpọ ọgụ Fightzone," ka Jim McMunn, General Manager Fightzone na-ekwu. “Anyị na-ewu ụlọ pụrụ iche maka ndị ọkpọ ọkpọ Britain na mba ụwa, na-enwe ohere ịnweta ọgụ dị egwu, ajụjụ ọnụ ndị ọkachamara na ọdịnaya ọdịnaya. Red Bee's OTT platform na-enye anyị ohere iru ndị na-ege ntị na gburugburu ụwa ma nyefee ogo gụgharia ọkwa na ụdị ngwaọrụ ọ bụla. ”
All ọgụ, metụtara ẹkenemede, Ajụjụ ọnụ, na ndị ọzọ na ọdịnaya ga-abụ dị na ina na Fightzone.uk. A na-echebe ọdịnaya site na ịrụ ọrụ geo-igbochi na arụmọrụ DRM, na-enyere Fightzone aka otu ndị na-ege ha ntị ma chekwaa ikike ha nwere n'ụzọ zuru ezu. Lee www.fightzone.uk maka usoro zuru ezu na ọgụ na-abịa.
"Fightzone gosipụtara nke ọma otu ndị nwe ọdịnaya na-agbanwe agbanwe ma na-ebuwanye ibu nwere ike iji ihe ha nwere rụọ ọrụ kachasị mma, ma weta ahụmịhe na-elele anya na ndị na-ege ntị na ụwa, site na ikpo okwu OTT anyị" kwuru, Steve Russell, Isi nke Ahịa, Red Bee Media. "Ihe mgbochi dị ole na ole karịa mgbe ọ bụla, mgbe ọ na-abịa na ịmepụta na ịgbasa azụmahịa nke gị, na anyị na-atụ anya na-akwado Fightzone njem ka uwa ịga nke ọma."
Ulo oru OTT zuru oke nke Red Bee na-enye ndi ahia na ndi nwe ihe di iche iche ohere ibido oru gharigharia zuru oke, ngwa ngwa na mfe, agbanyeghi ndi na ege nti ma obu echiche ahia. Ọ na-akwado ụdị ọdịnaya niile gụnyere ndụ, usoro, njide na ịchọ, yana oke nhọrọ nhọrọ ego (dịka mgbasa ozi kwadoro, ndenye aha, ịkwụ ụgwọ ụgwọ na ụgwọ ego). A na-eme nkewa ndị na-ege ntị n'ụzọ dị mfe site na arụmọrụ na-egbochi geo dị elu na nhọrọ DRM. Ọtụtụ n'ime ọrụ ndị ọzọ Red Bee na-ejikọ ngwa ngwa na ikpo okwu, gụnyere nchịkọta ọdịnaya, metadata na nkọwapụta akpaka.
Ihe kacha ọhụrụ site Ericsson (-ahụ ihe niile)
Fightzone na-ebupụta Ọrụ Gụgharia zuru ụwa ọnụ maka British na International Boxing na Red Bee's OTT Platform - April 30, 2021
Ekstraklasa ahọrọ Red Bee ka ọ bụrụ onye ọrụ teknụzụ ọhụụ maka Ekstraklasa.TV - April 7, 2021
GB News iji bido Red Bee Media nke sọftụwia sọftụwia - March 18, 2021
Boxing Ogu Fightzone UK ebi ndụ OTT OTT Platforms Red Bee Red Bee Media gụgharia 2021-04-30
Previous: Calrec na-agbasa ikike izipu ọrụ na ike ngosipụta ngwaahịa
Osote: Panasonic Canada ghọrọ onye mmekọ adịchaghị ngwa ngwa Quicklink